Fahantrana: ankizy 1 amin’ny 3 tsy ampy sakafo | NewsMada
Fahantrana: ankizy 1 amin’ny 3 tsy ampy sakafo
Misokatra ho an’ny rehetra, nanomboka omaly hatramin’ny 20 oktobra izao, etsy amin’ny La City Ivandry, ny fanehoana an-tsary ny tontolon’ny tsy fanjarian-tsakafoa, tanterahin’ny Unicef sy ny Pam. Tafiditra ao anatin’ny fampahafantarana ny tatitra eran-tany momba ny tontolon’ny ankizy ity fampirantiana an-tsary ity.
Tanjon’ny fampirantiana ihany koa ny hampivondrona ireo malala-tanana sy mpiara-miombon’antoka miady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo nanao ny ainy tsy ho zavatra hatrany.
Niharatsy ny salanisa nivoaka raha ny tatitra eran-tany navoaka tany Etazonia, ny 15 oktobra teo, mahakasika ny tsy fanjarian-tsakafo mahazo ny ankizy sy ny zaza, araka ny fanairana ataon’ny Unicef.
Antony mahatonga izany ny fahantrana, ny fivangongoana an-tanàn-dehibe, ny fiovaovan’ny toetr’andro, ny tsy fahaizana mifidy ireo karazan-tsakafo hanina ka manimba ny fahasalamana…
Ankizy iray amin’ny telo latsaky ny dimy taona (200 tapitrisa) ny mijaly amin’ny tsy fanjarian-tsakafo. Miseho amin’ny alalan’ny hatavezana be loatra izany ary mankarary ilay zaza.
Ankizy roa amin’ny telo latsaky ny roa taona kosa ny misakafo tsizarizary ary tsy ampy amin’ny fitomboan’ny vatany sy ny fivelaran-tsainy akory ny sakafo haniny. Mitarika amin’ny tsy fitomboan’ilay zaza, ny fahosany amin’ny fahasalamana ary mampidina ny hery fiarovany izany tsy fahampian-tsakafo izany. Mety hitarika hatrany amin’ny fahafatesan’ilay zaza mihitsy aza ity tsy fahampian-tsakafo mahazo azy ireo ity.
Lasa tsy miaina milamina ihany koa ireo ankizy mihinana sakafo tsy ara-pahasalamana. Anetsiny ireo ankizy maneran-tany tsy manam-pidiny amin’ny sakafo ka lasa tsy mihinana ara-pahasalamana. Betsaka rahateo ny karazan-tsakafo mitobaka kanefa tokony holanjalanjaina izay hanina hitondra fahasalamana fa tsy hiteraka aretina indray avy eo.